Kanye West:- Waxa Laga Ogyahay – iyo Waxa Aan laga Ogeyn – Nolasha Heesaagan Caanka Ah | Gaaroodi News
Kanye West:- Waxa Laga Ogyahay – iyo Waxa Aan laga Ogeyn – Nolasha Heesaagan Caanka Ah
Arrimaha dhowr ah oo ku saabsan fannaanka caanka ku ah heesaha Rap-ka ah qaada ee u dhashay dalka Mareykanka, Kanye West, ayaa la garanayaa. Fannaanka heesihiisa waxay dhowaan noqdeen kuwa loogu gadashada badan yahay.
Xaaladdiisa wey adagtahay marka la eego xaqiiqooyinka ka sooo ifabaxaya, waxayna dhashay shaki la xiriira caafimaadkiisa dhanka maskaxda. West oo ka hadlayo ololahiisa doorashada madaxweynaha uu ku qabtay South Carolina
Waxay sheegtay in xaaladda noocan ah ay u baahan tahay in la kala saaro magaca uu qofku leeyahay iyo xaaladda maskaxeed ee uu wajahayo. West oo madaxweyne Trump kula kulmay aqalka cad
Ama waxba ha dhihin oo ka aamus
Fikirka naxariista leh wuxuu meesha ka saarayaa ficilka liddiga ku ah ee naxariis darrada ah, halka ay hadallada xun ay abuurayaan walwal dhalin kara in si qotodheer looga wadahadalo arrintan iyo arrimaha ku lug leh.
Jawaabta ay sida weyn bulshadu u wadaagtay wuxuu ka yimid fannaanadda Jalsey, waxayna ku baaqday in la fahmo halganka ay kula jirto waxyeellada dhinaca maskaxda ah.
Waxay tilmaamtay in dadka dhibaatooyiinka noocaas ah la kulmay waxay dareemayaan “haddi aynaan fahmi karin fadlan ka aamus”, ayey tiri.